Vanogadzira Mashini Vagadziri - China Inotsvedza Machine Suppliers & Factory
2m-6m yakakwirira kumhanya inotsvedza mashini
Yakakurumidza kumhanya yekutsvedza mashini inoumbwa neyekusaziva michina, yekucheka michina, yemhepo michina, rimwe nerimwe basa roller uye kushungurudzika kudzora kudzora kudzora uye kuona mudziyo. Nheyo yekushanda iri seiyi inotevera: simbi yakaiswa mbichana zvigadzirwa zvaburitswa kubva mukusagadziriswa michina inopinda mumucheka wekucheka kuburikidza nefurati yekubvisa roller, kushungurudzika kwekuona roller, inobatsira roller uye kutsauka gadziriso system. Mushure mekunge zvigadzirwa zvabviswa, nzira yekudzosera ichadzosera ...
2m-6m Yakanyanya kumhanyisa slitting muchina
Yekumhanyisa yepamusoro inotsvedza mashini Kuti tikwanise kuita zvinodiwa nemusika, isu takaita matanho akadai-makuru masiteki. Yakakurumidza kumhanya yekutsvedza mashini inogona kucheka mamita maviri kusvika matanhatu emamita akapakata zvinhu, seBOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC zvichingodaro. Machine inopa Adopt Motorola servo mota uye Nokia yekufamba inodzora kuti ipe tension yakagadzikana Optimized chimiro, chiri nyore pamhepo inoshanda system, uye inogona kubatana neInternet yezvinhu yekudzora kure Zvinoenderana nekutungamira kutonga ..
Pipe yekucheka muchina
Yekumhanyisa yepamusoro inotsvedza mashini Kuti tikwanise kuita zvinodiwa nemusika, isu takaita matanho akadai-makuru masiteki. Yakakurumidza kumhanya yekutsvedza mashini inogona kucheka mamita maviri kusvika matanhatu emamita akapakata zvinhu, seBOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC zvichingodaro. Meshini maficha: Adopt Motorola servo mota uye Motorola yekufamba inodzora kuti ipe kugadzikana kwekutonga Yakarongedzwa chimiro, inoshanda online pamhepo system, uye inogona kubatana neInternet yezvinhu zvekudzora kure Kubva pane main contro ...